Multi-Vitamin: လေယာဉ်မောင်းခန်း​တွင် လိင်ကိစ္စ ​သောင်း​ကျန်း​​သည့်​စုံတွဲ
​လေယာဉ်​မောင်း​ခန်း​အတွင်း​ အနီ​ရောင် ဝတ်စုံနှင့်​ အမျိုး​သမီး​က သူမ၏ အမျိုး​သား​ အ​ဖော်အား​ ပါး​စပ်ဖြင့်​ လိင်​ဖျော်​ဖြေ​နေ​သော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ​ကြောင့်​ ကသည်း​ ပစိဖိတ် ​လေ​ကြောင်း​လိုင်း​အတွက် ဂယက်ရိုက်ခတ်သွား​ခဲ့​သည်။
ထို့​အပြင် AFP သတင်း​ဌာနက အနီ​ရောင် ဝတ်စုံသည် ကသည်း​ပစိဖိတ် ​လေ​ ကြောင်း​လိုင်း​၏ ​လေယာဉ်မယ် ယူနီ​ဖောင်း​ဖြစ်ပြီး​ အမျိုး​သား​ကမူ ​လေယာဉ်ပိုင်း​​လော့​ ဖြစ်နိုင်​ကြောင်း​ ​ ဖော်ပြခဲ့​ရာ အ​ခြေအ​နေ ပိုဆိုး​သွား​ခဲ့​သည်။ ​
လေ​ကြောင်း​လိုင်း​မှ ​ပြော​ရေး​ဆိုခွင့်​ရ အမျိုး​သမီး​က ယခုကိစ္စနှင့်​ ပတ်သက်ပြီး​ မိမိတို့​ စုံစမ်း​မှုများ​ ပြုလုပ်​နေ​ကြောင်း​ ​ပြောဆိုခဲ့​သည်။ ထို့​အပြင် ဓာတ်ပုံထဲမှ အမျိုး​သမီး​သည် မိမိတို့​ ​လေ​ကြောင်း​လိုင်း​မှ ဖြစ်​ကောင်း​ဖြစ်နိုင်​ကြောင်း​လည်း​ အဆိုပါ ​ပြော​ရေး​ဆိုခွင့်​ရ အမျိုး​သမီး​က ဝန်ခံသွား​သည်။ ဓာတ်ပုံထဲမှ အမျိုး​သား​၏ အ​ခြေအ​နေကိုမူ သူမက မှတ်ချက်မ​ပေး​သွား​​ချေ။
အမျိုး​သား​၏ ယူနီ​ဖောင်း​မှာ ပိုင်း​​လော့​တစ်ဦး​ဟု ယူဆရဖွယ် ရှိ​နေ​ကြောင်း​လည်း​ သိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင်မူ အဆိုပါ ကိစ္စသည် ​လေယာဉ်ပျံသန်း​​နေစဉ် ဖြစ်ခဲ့​သည်ဆို​သော မည်သည့်​ အ​ထောက်အထား​ကိုမျှ မရရှိ​ သေး​​ကြောင်း​၊ ထို့​​ကြောင့်​ လုံခြုံ​ရေး​ စံနှုန်း​များ​ကို ချိုး​​ဖောက်ရာ​ရောက်သည်ဟု ယူဆ၍ မရနိုင်​ကြောင်း​ လည်း​ ယင်း​အမျိုး​သမီး​က ​ပြောဆိုသွား​သည်။
Posted by 925 at 18:40
koko6June 2012 at 17:49
ပုထုစဉ်ကလွဲ၇င်လစ်ရင် လုပ်ကြတာပဲလေ ကိုမလုပ်ချင်သလိုဟန်ဆောင်ကြတာသူ များကိုပြောချင်တာဘာကြောင့်၂၃၄၅၆၇၈၈၄889၀-၀၀၃၂
Anonymous 20 September 2012 at 15:14
ကျွန်တော် တို့ချစ်သူ နှစ်ယောက် တစ်ခါမှား ဖူးမိခဲ့ပါတယ် အရင်တုန်း က မှား ဖူး ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ကိစ္စတွေ ဖြစ်မလာ ပါ ဘူး။ဒါပေမယ့် ထပ်မှား ဖို့ အကြောင်းတွေ အများကြီးဖန် လာပါတယ် ခင်ဗျ။ကျွန်တော် တို့က လူငယ်ဆို တော့ နောက်ထ်ထားမှား ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ အများ ကြီး ရှိနိူင် လောက်တယ် လို့သူငယ်ချင်း တွေ က ပြော ပါတယ်။တကယ်လို့မှား မိမယ်ဆို ရင်လေ ကိုယ်ဝန်မရ အောင် ဘယ်လို လုပ်ရ လဲ ခင်ဗျာ။နောက်ပြီး ကွန်ဒုံးမသုံး ပဲ နဲ့ ကိုယ်ဝန် ကို တားဆီးနိူင်သလားခင်ဗျ။မိန်းကလေး ဘက် က ဆေးတွေ ဘာ တွေ ရှိလား ခင်ဗျ ကျွန်တော် သိချင် ပါတယ် ဖြေကြားပေး ပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
whoo 10 October 2012 at 01:59
အယ် ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတော့ က ............... မဆိုးပါဘူး ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
Anonymous6December 2012 at 20:34
this isahuman...
၀မ်းဗိုက်အတွင်း မြွေကြီးရောက်နေသည့် အမျိူးသမီး.......
မအေတူ ဖအေကွဲ အမြွှာညီနောင်
How to Keep Teeth White Naturally ???
UAE မှာ ကြွေကျ၊ မြေခတဲ့ တိမ်တိုက်
ကုလသမဂ အဆောက်အဦး ဗုံးခွဲမှု ဖြစ်ပွား
က​​လေး​​ငယ်တစ်ဦးအရွယ်ရှိ ဖား​​ကြီး​​တစ်​​ကောင် နာ...
မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်မိလို့ ကျောက်တုံးဖြင့် ထုသတ်ခံရသည့်...
ဟန်မူရာဘီ၏ ကိုဓ ဥပဒေလေလား
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် သုံး​စွဲ​နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်​ ​လေယာဉ်...
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အမွှေးအမျှင်အထူဆုံးမိန်းကလေး
ကြက်ဥ အတု ဆိုပါလား !
ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး 3D အချစ်အကြမ်းကား Avatar ကိုကျော်...
အဝတ်လဲခန်းထဲက လျှို့ဝှက် ကင်မရာ ရှာဖွေနည်း
ကိုယ်လုံးတီးဆို Free ပေးမယ်
သားအိမ်ဖြတ်ထုတ်ရသည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အမျိူးသား
Male တားဆေး ဆိုပါလား
ကျောင်း​အုပ်ဆရာမကြီး​ကို သတ်ဖြတ်သည့်​ အ​မေရိကန်ဆယ်...
ချိုင်းနားရဲတပ်ဖွဲ့ ကို (နိကက်) နဲ့ (အတက်ကင်) လုပ်...
အပေါ့ သွားယင်း ဆော့ ကစားနိုင်မည့် ဗီဒီယိုဂိမ်း
အခု ကျွန်တော့မှာ ခြေဖ၀ါး နှစ်ခုနဲ့ဗျ
ဆေးခပ်ကာအပိုင်ကြံမည်ကို သိရှိနိုင်မည့် ဖျော်ရည်စ...
Dream path forasuccessful man :D
ဒါလဲ ဟုတ်ပေသားပဲ .... !!!
What's up (What's Going On)-4Non Blondes Acousti...
စည်းကမ်းဖောက်ပြီး ကားရပ်လျှင် ဤသို့ အရေးယူမည်
အ​​မေရိကန်တွင် အမျိုး​​သမီး​​များ​​ အင်္ကျီမဝတ်ဘဲ လမ...
Mercedes ----- Bus or House?
ပျောက်ဆုံး​​နေသည့်​ လူသား​မျိုး​နွယ်စုတစ်ခုအား​ အ​...
နိုင်ငံခြား​သား​ အလုပ်သမား​များ​ကို ဓား​ပြတိုက်သည်...
ကြွက်များ​​​သောင်း​​ကျန်း​​သဖြင့်​​ တရုတ်တွင်ြေ...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကျဉ်း​ချုံး​လက်ထပ်ပွဲများ​ ပိုမိ...
လေယာဉ်မောင်းခန်း​တွင် လိင်ကိစ္စ ​သောင်း​ကျန်း​​သည့်...
ဟစ်တလာ မိန်းမစိတ် ပေါက်သွားစေရန် မဟာမိတ်တို့ စီစဉ်...
နာဆရီကို ယခု သီတင်းပတ် အတွင်း ခေါ်ယူနိုင်ရန် မန်စီန...
ပြိုင်ဘက်အား တိုက်ခိုက် ခဲ့ပြီးနောက် မော်ရင်ဟိုအား...
ဖလား မိုးခေါင်နေမှုကို အဆုံးသတ်မယ့် အာဆင်နယ်ကို ဆန်...
ဥရောပ၏ ကုန်းရေနှစ်သွယ်သွား ကားများ စုဝေးမောင်းနှင်...
လှပသော အမျိုးသမီးနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းသည် ကျန်းမာရေး...
Mind Blowing Artistry of Marvelous Tattoos
***Is 29-Year-Old Brit The Youngest Grandfather Ev...
ကမ်းလင့်မယ့်လက်များ (Nagis အမှတ်တရ)
(လေးဖြူ − မရေရာဘူး)
အ​မေရိကန်​​တွင် ​ဒေါ်လာ ၄ သန်း​​​တန် ​နောက်ဆုံးေ...
ကမ္ဘာ့​​​ပထမဆုံး​ အင်တာနက်သုံး​​​​​မော်​တော်ကား​ မိ...
*** Space Hotel Coming Soon?***
ယောက်ျားများကို (အန်) စေသော မိန်းမ
မိန်းမများကို (အန်) စေသော ယောက်ျား
Lady Gaga ရဲ့ အမိုက်ဆုံး အမဲသားအကျီ ဒီဇိုင်း
4 Best Natural Face Cleansers
What Are Natural Antioxidants? Natural antioxidant...
The Stunning Fly Geyser [Black Rock Desert, Nevada...
How Volkswagen Test Their Cars
Funny cat fails catchingabird :D
ရုရှား သမ္မတဟောင်း ပူတင် ရေငုပ်ရင်း ရှေးခေတ် ဂရိအို...
ခရက်ဒစ်ကတ် အရွယ် သွေးစစ်ကိရိယာက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပို...
ပင်နီဆီလင် တွေ့ရှိမှုနောက်ပိုင်း အကြီးကျယ်ဆုံး တွေ့...
What Are Benefits of Eating Black Pepper?